Tirakoob ku saabsan ardeyda ka baxday jaamacadaha dalka oo la soo saaray - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Tirakoob ku saabsan ardeyda ka baxday jaamacadaha dalka oo la soo saaray
Tirakoob ku saabsan ardeyda ka baxday jaamacadaha dalka oo la soo saaray
June 5, 2018 admin627
Hay’adda Iftin Foundation ayaa soo daraasad ay ka samaysay ardaydii sanadkii 2017-kii ka soo qalinjebisay Jaamacadaha dalka, taas oo ah markii labaad ee ay hay’addu ka sameyso dalka oo dhan.
Daraasaddan oo ay hay’adda Iftin ku howlanayd bilihii ugu dambeeyay ee sanadkii hore waxaa ka qaybqaatay illaa 36 Jaamacdood oo ku kala yaalla 14 magaalo oo dalka ka mida kuwaas oo kala ah: Muqdisho, Boosaaso, Gaalkacyo, Garoowe, Baladweyn, Jowhar, Baydhabo, Kismaayo, marka, Qardho, Buuhoodle, Goldogob, Ceerigaabo iyo Dhuusomarreeb.
Ardayda guud ahaan sanadkii 2017 ka soo qalinjebisay Jaamacadaha dalka ayaa gaaraya illaa 11,263 arday, iyadoo tirada wiilashu ay ahaayeen 7,460 taas oo ah 66% halka tirada gabdhuhuna ay gaarayeen 3,803 taas oo ayana u dhiganta 34%.
Sahankan ayaa muujinaya guud ahaan magacyada kulliyadaha ay ardaydaasi ka soo qalinjebiyeen, kuwaas oo gaaraya 25 kulliyadood. Xogta ayaa muujisay in saddexda kulliyadood ee ay ka soo baxeen ardeyda ugu badan ay kala yihiin:-
1. Maamulka Hawlaha (Business Administration) sida Accounting, Human Resources, Banking & Finance) oo tirada ka soo baxday ay gaareyso 1,732 qof taas ah 15.38%;
2. Kalkaaliyennimo iyo Umulisonnimo (Nursing & Midwifery) oo ay ka soo baxeen 1,503 qof, taas ah 13.34%, iyo
3. Maamulka Guud (Public Administration) oo ay ka soo baxeen 1,316 qof taas oo ah 11.68%.
Halka saddexda kulliyadood ee ay ka soo baxeen ardeyda ugu yar ay kala ahaayeen:-
1. Tirakoobka iyo Qorsheynta (Statistics & Planning) oo ay ka soo qalinjebiyeen 11 arday keliya oo u dhiganta 0.10%.
2. Culuumta Siyaasadda (Political Science) oo ay ka soo qalinjebiyeen 18 arday taas oo u dhiganta 0.16%; iyo
3. Saxaafadda (Journalism) oo ay ka soo baxeen 33 qof taas oo ayana u dhiganta 0.29%.
Sahanku wuxuu sidoo kale eegay tirada gabdhaha iyo wiilasha ee kulliyad kasta si loo ogaado halka ay ku kala badan yihiin. Waxaa soo baxday gabdhaha ugu badan ay ka soo qalinjebiyeen saddexda kulliyadood ee kala ah:-
1. Nursing & Midwifery (1,125 gabdhood);
2. Public Health (655 gabdhood) iyo
3. Business Administration (370 gabdhood).
Halka wiilasha ugu badan ay ka soo qalinjebiyeen saddexda kulliyadood ee kala ah:-
1) Business Administration (1,362 wiil)
2) Computer Science & IT (1,118 wiil) iyo
3) Public Administration (1,048 wiil)
Daraasaddan ayaa sidoo kale muujisay sida jaamacadaha dalka ugu kala badan yihiin soo-saarista ardayda jaamiciyiinta ah. 10ka jaamacadood ee ardayda ugu badan soo saaray waxay kala yihiin sida ay u kala horreeyaan:- 1) University of Somalia, 2) Jobkey, 3) East Africa, 4) Horseed, 5) Plasma, 6) Muqdisho, 7) Salaam, 8) SIMAD, 9) Somali International University SIU iyo 10) Benadir. Marka laga reebo Jaamacadda Bariga Afrika, 9ka kale jaamacad ee ardeyda ugu badan ay ka soo baxeen waxay ku yaallaan Muqdisho.
Waxaa sidoo kale warbixinta lagu eegay sida magaalooyinka dalka ay u soo saaraan ardeyda soo dhameysa jaamacadaha. Magaalada Muqdisho ayaa magaalada ugu badan ee soo saartay qalinjebiyeyaasha ugu badan oo dhan 8,481 oo u dhigma 75.3%, waxaana ku soo xigta magaalada Boosaaso oo soo saartay 882 oo u dhiganta 7.83%, halka magaalada ugu yar ee soo saartay ay tahay magaalada Dhuusamarreb oo ay ka soo qalinjebiyeen 13 arday oo u dhigma 0.12% oo kaliya.
Xafladdaan waxaa ka hadlay Masuuliyiin ay ka mid yihiin Wasiirudowlaha Wasaaradda Waxbarashada Mudane Craxmaan Max’ud (Jaabiri), Agaasimaha Arrimaha Bulshada ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Mudane Ismaaciil Macallin C/llaahi, Agaasime ku xigeenka Maamulka ee Rugta Ganacsiga Mudane Haashim Ducaale, Xoghayaha Guud ee Ururka Jamacadaha Soomaaliyeed Mudane C/kariin Xasan Jaamac iyo Guddoomiyaha Dalladda Waxbarashada ee SAFE, Mudane Craxmaan Macallin Axmed (Ablaal) iyo masuuliyiin kale.
Cabdifitaax waa Kabalyeeri Hadana Jaamacad Dhigta !!!
Xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle oo lagu dilay weerar Jidgal ah
October 30, 2019 Duceysane